9 Easy ka dib Dhibaatooyinka Casharrada on YouTube | Download
Marka ay dadku ka hadlayaan abuuro raadinaya saamaynta muuqaal weyn, mana ay ka boodi kartaa Adobe ka dib Raadka. Tani waa warshadaha ee keentay digital naqshadeynta mooshin software, gaar ahaan movie post-soo-saarka. Haddii aad addoonsada ka dib Raadka, waxaad sidoo kale xirfadlayaasha ah markii duubey ama intros website.
Waxaa jira xitaa waa qalooca waxbarashada uga yaacday ilaa u ka dib Dhibaatooyinka ka badan Photoshop, software isla Adobe. Laakiin iyadoo la kaashanayo ka dib Casharrada Raadka video on YouTube , waxa aad baran kartaa adiga ku gaar ah, oo ay tahay gebi ahaanba bilaash ah. Waxaad weli u baahan doontaa in uu lacag si aad u barato ka dib Dhibaatooyinka?
AE Tutorial Talooyin:
1. Isticmaal Wondershare AllMyTube inaad kala soo baxdo oo dhan barnaamijka kuwaas oo loogu talogalay offline loo maqli karo.
2. Ka dib kala soo bixi Raadka tutorial maxaa yeelay, waxay isticmaalka shakhsi. Lama ogola in aad u qaybiyo si kasta, ama u isticmaalo oo qayb ka ah video. Qaado halis kuu gaar ah si ay u isticmaalaan video ah soo bixi ka dib Dhibaatooyinka ka YouTube.
3. Booqo YouTube.com in ka dib markii Casharrada Raadka.
Download iyo badalo YouYube videos in habka ugu fudud
• Download YouTube videos iyo playlists ku yaalla
• Download qayb-heerka sare MP3 YouTube in hal click.
• Beddelaan soo bixi video in ka badan 150 qaabab
• Download videos ka kale 100 video goobood oo ay ku jirto Break, FunnyorDie, vimeo oo dheeraad ah
• Download videos 3x dhakhso leh jadwaliye hawsha.
• Qor wax kasta oo video laga websites online.
• Transfer video in telefoonka gacanta cable USB aan.
• Sida ciyaaryahan video ah iyo tababare
1 ka dib Dhibaatooyinka Aasaaska - Hordhac
Ka dib markii version Raadka: CS4, CS3
Tani waxay ka dib Dhibaatooyinka tutorial marayo oo dhan farsamooyinka aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u bilowdo barnaamijka. Marka hore dhammaan shaqada lagu sameeyey ka dib Raadka waa la badbaadiyey la ah ".aep" kordhin. (Raadka Project ka dib). Sidoo kale ka wada hadleen waa habka loo dhoofiyo iyo dhoofinta files in dib markii Raadka. Warbixin hordhac ah oo guddi toolbar ah oo la inta badan loo isticmaali doonaa marka ka shaqeeya mashaariicda kala duwan. Guudmar kooban oo qaar ka mid ah hawlaha dhowr ka mid ah qalabka ku yaal bar ah. Discussed waa sida footage waxaa soo abaabulay guddiga mashruuca. Rearranging iyo resizing darfihiisuba isagay kala duwan ee suuqa kala dib markii saamaynta isticmaalka fudud kaas oo sidoo kale ka mid ah dhuumashada iyo arkayaa gudi kala duwan marka aan la isticmaalayn si loo wanaajiyo.
2 Ka dib markii Raadka Tutorial - Abuur Curiska ah
Tani tutorial ka dib Dhibaatooyinka kor maraya abuuraya ka kooban fudud. Xusay waa sida ay ku darto footage sidiisa ah. Haddaba isagoo tilmaamaya labo hab oo markii ugu waxbaa laga beddeli karaa. Mid ka mid ah ay soo jiiday tilmaame hadda mar oo ay la socdaan waqtiga iyo kan kale adigoo riixaya "u tag waqti 'button iyo lahaan doonaa wakhtiga saxda. Guudmar kooban oo il files iyo meesha ay ku yaalaan marka ku daray in ay ka kooban. Isticmaalka qaababka sida Zoom in la sameeyo guddi ka kooban intan ka waxtar badan. Tutorial Tani waxa kale oo ay muujinaysaa ah tuuryo keyboard yar oo loo isticmaali karaa si loogu zooming iyo sidoo kale iyadoo la isticmaalayo jiirka. Ugu dambayntiina, iyadoo la isticmaalayo keyboard ah si ay ula qabsadaan jir markii ay jir.
3 Ka dib Raadka Tutorial - Curiska Panel
Tani tutorial ka dib Dhibaatooyinka diiradda saarayaa astaamo sare ee guddiga ka kooban. Waxaa la degaanno ammaan bilaabmay, sharxaya farqiga u dhexeeya hawleed nabdoon oo horyaalka degaanno ammaan ah iyo sida loo toggle kuwa degaanno ammaan ah iyadoo la isticmaalayo tuuryo keyboard ah. Waxa kale oo ay muujinaysaa adeegsiga xirneeyn qeybiyaha ka kooban tahay iyo sida ay u caawisaa inuu sameeyo dhaqdhaqaaq ah oo badan oo sax ah. Sidoo kale sharaxay waa isticmaalka aasaasiga ah taliyaha. Tutorial Tani waxay sidoo kale xaaladaha gobolka, taas oo loo baahan yahay midab asalka in la bedelo ka madow iyo sida loo tago oo ku saabsan isagoo sidaas samaynaya. Soo bandhigay waa Roobka hufnaan toggle ah, feature ah in ay sidoo kale ku jiraa isagoo Adobe Photoshop oo toggles midabka asalka ka midab gaar ah asalka ah oo hufan.
4 Ka dib Raadka Tutorial - Animation aasaasiga ah
Tani tutorial ka dib Dhibaatooyinka daboolayaa animation aasaasiga ah ee walxaha. Tutorial wuxuu bilaabay tuuryo keyboard kala duwan oo loo isticmaali karaa in laaban tilmaame waqti ay ku bilowga ah. Waxaa barayaa feature keyframe ee dib markii Raadka, waxay waxaa loo isticmaalaa & sida loo kala isticmaalo. Waxaa iyada oo sida ay u beddesho booska uu ka walxaha in halabuurka ah, adigoo isticmaalaya keyframes oo dheeraad ah oo ku saabsan, isagoo intaa ku daray keyframes badan tahay in la beddelo animation uu aadayo. Sidoo kale muujiyay jira siyaabo in toggle dhexeeya khadadka si toos ah iyo khadadka curvy in animation ah. Ugu dambeyntii, waa sida ay muujiyeen in la beddelo jidka animation oo ay u wareegaayo ka keyframes horay u taagan.
5 ka dib Dhibaatooyinka Dhexe Tutorial by Zolaboy
Ka dib markii version Raadka: CS5, CS4, CS3, CS2, CS
Tani dhexe ka dib Dhibaatooyinka tutorial si deg deg ah barayaa xirfadaha dhexe oo u gargaartaan in la abuuro animations fiican. Soo kordhiyay waji iyo muujinaysaa shareeraysaa ee walxaha taas oo macnaheedu yahay in ay kala tagaan shayga ka soo jeeda. Sidoo kale muujiyeen yihiin sida loo codsado goobaha kala duwan si ay maaskaro oo ay ku jiraan feathering iyo hufnaan oo ay la socdaan xaaladaha sharxaya kaas waxyaabahan ay faa'iido yeelan doonto. The isticmaalka iyo muuqaalada darfahoodii isbaddalaa hadba sida lagu sharaxay oo ay ku jiraan darfahoodii info, audio iyo Kulanka Xiisaha Leh. Ugu dambeyntii waxay iftiimisay waa sida loo sameeyo habka aad agagaarka shaqada, kuwaas oo kaa caawin doonaan inaad ka duuli shaqada inta badan ka sahlan oo macaan.
6 5 Talooyin Dhexe Cool u dib markii Raadka
Ka dib markii version Raadka: CS3, CS2
Tani waxay ka dib Dhibaatooyinka tutorial maraa shan talooyin dhexe ee dib markii saamaynta. Talooyinkan u gargaartaan in socodka shaqo wax ku ool ah iyo sidoo kale kor loo qaado tayada animations ah. Tip koowaad waa muujinta "si fudud fudayd 'taas oo hoos animation ka barta gaar ah samaynta dhaqdhaqaaq ay u muuqdaan kuwo ka sii organic. Caaradda kale waa isticmaalka editor garaafka si ay u sameeyaan dhaqdhaqaaq ka badan organic sida fudud ee sahlan laakiin sida badan goobaha dheeraad ah oo ka dhisto. Isticmaalka tracker mooshin ay u dardar abuurka ah ee Jidka animation ah kaas oo sidoo kale u oggolaanaysa in animation ah si ay u haystaan ​​in ka sii socodka ah organic. Ugu dambeyntii, iyadoo la isticmaalayo gaysaan plugin in la abuuro animations laga cabsado oo la abuuro jeeda aan la taaban karin.
7 Sida loo abuuro jawi 3D la Lights iyo hararka noolaha
Ka dib markii version Raadka: CS3
Tani waxay ka dib Dhibaatooyinka tutorial muujinaysaa sida si ay u abuuraan jawi 3D iftiinka iyo Hooskooda. Explained jira meelo kuwaas oo aad ka heli kartaa qaabab kala duwan si aad u soo jeeda. Sidoo kale sharaxay in tutorial tani ay tahay sidii ay u soo bixi noocyada iyo iyaga rakibi in dib Dhibaatooyinka kaas oo sidoo kale waa hab isku mid ah software kale Adobe. Muujiyeen waa sida loo isticmaalo farsamooyinka kala duwan, iftiinka iyo hooska si aad u hesho muuqaal u eg ka 3D kaamil ah. Sida loo dalbado light kuwaas oo hadhkiisa qoraal iyo sidoo kale in ay ka kooban guud ahaan. Waxa kale oo aad qaadataa iyada oo la isticmaalayo lakabka kamarad iyo muujiyaa sida loo isticmaalo qaababka kala duwan ee camera sida qalab falagiisuu si ay u abuuraan animation ah ee goobta 3D.
8 Abuur 3D Video for YouTube leh ka dib Raadka
Tani waxay ka dib Dhibaatooyinka tutorial muujinaysaa sida si ay u abuuraan si caddaalad ah oo fudud animation ah qoraalka 3D. Waxaa bilaabmaa loo dhoofiyo iyo qoraalka ka dibna saddex labada waji leh asalka ah. Camera ayaa markaa ka dibna ku daray goobaha la beddelo iyo keyframes waxaa la geeyaa si ay u nooleyn booska. Curinta waxaa lagu labalaabka iyo isbedel lagu sameeyo siday u kala horreeyaan labada isha bidix iyo in ishaada midig si ay u abuuraan waayo aragnimo 3D. Kuwaas oo keliya waa aasaaska loo baahan yahay in la abuuro video 3D ah. Sidoo kale iftiimiyay waa habka taas oo animation 3D buriyay la uploaded karin, YouTube si ay u abuuraan waayo aragnimo ah 3D.
9 Abuur walxaha Orbusing Trapcode gaar ah iyo Shumacyada indhaha
Ka dib markii version Raadka: 7, CS3, CS4, CS5
Tani faahfaahsan ka dib Dhibaatooyinka tutorial muujinaysaa sida si ay u abuuraan ah Orb walxaha Animation iyadoo la isticmaalayo laba plugins Shumacyada indhaha iyo Trapcode gaar ah oo ay la socoto adigoo isticmaalaya weedho yar. Laba nalalka waxaa la abuuray markaa gacanta ku shay waxba. Tibaaxda ayaa kadib la siiyaa si ay wax in waxba kama kaas oo u ogolaanaya dhaqdhaqaaqa random iyo warejin iftiinka. Waxyeelada gaar Trapcode waxaa markaas ku daray in ay nuurka si ay u abuuraan raad fudud. Deegaanka A adduunka meel ka dibna la abuuray oo isticmaalaya plugin isla Trapcode gaar ah. Shumacyada ka dibna ku daray ka Shumacyada indhaha plugin la isticmaalayo mid ka mid ah presets ay. Deegaanka waxaa markaas ku daray in xusus light. Qiimaha Lens ka dibna ku daray in ay nuurka si ay u abuuraan animation la yaab leh.
9 Easy InDesign Casharrada on YouTube inay Baro InDesign
Sida loo Encode DVD Faylal ay la DVD Encoder
Video inay Zune Converter: Beddelaan Video si fudud Zune
> Resource > Beddelaan > 9 Easy ka dib Dhibaatooyinka Casharrada on YouTube